बालुवाटार प्रकरणमा माधव र बाबुराम चोख्याउन, नेकपा एसलाई वैध बनाउन गजेन्द्रलाई मन्त्री
बुधबार १० कार्तिक, २०७८
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » बालुवाटार प्रकरणमा माधव र बाबुराम चोख्याउन, नेकपा एसलाई वैध बनाउन गजेन्द्रलाई मन्त्री
शुक्रबार २२ असोज, २०७८
काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिका समेत कार्यपालिकाको सत्तारुढ गठबन्धनमा मिसिएको छ ।
न्यायपालिकाको कोटाबाट नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँदै सत्तारुढ गठबन्धनको हिस्सेदार सर्वोच्च अदालत समेत बनेको हो ।
हमाललाई नेपाली कांग्रेस तर्फ भाग लगाएजस्तो देखाएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको श्रोतको दावी छ ।
हिजो बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले दुई जना मन्त्री खोजेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
त्यसका लागि सिँधै नभएर कांग्रेसको भागमा राखेर गैर सांसदहरुबाट २ जना मन्त्री बनाउँनुपर्ने बाध्यता सुनाउनुभयो । देउवाले भन्नासाथ माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलेपनि हो दिनुपर्छ ।
हाम्रो सकसपूर्ण घडीमा अदालतले फैसला गरेको हो । अझैपनि सकसपूर्ण अवस्था कायम नै छ अदालतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भएपनि भाग दिनैपर्छ भनेर एक स्वरमा भन्नुभयो ।
उहाँहरुलाई बालुवाटारस्थित ललित निवासको जग्गा प्रकरणमा हुने फैसलासँग डर छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक १५ गते अन्तिम फैसला दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
मिति नै तोकेर प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पद बार्गेनिङ्ग गरेको श्रोतले पुष्टि गरेको छ । यति मात्र हैन नेकपा एमाले विभाजन गराएर दर्ता भएको नेपाल नेतृत्वकै पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को वैधानिकताको विषयपनि अदालतमा विचाराधिन छ ।
यदि त्यो पार्टी अवैध भनियो भने फेरी सत्ता हल्लिन्छ । साथै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश गैरसंवैधानिक भन्दै दायर भएको रिट समेत अदालतमा विचाराधिन छ ।
त्यो फैसलाले उक्त निर्णयहरु उल्ट्याउन पाइयो भने धेरै पदहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अवशर आउँछ । यसैले अदालतलाई प्रभावमा पार्न भाग दिइएको श्रोतको दावी छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएका हमाल पछिल्लो समय कांग्रेस राजनीतिमा त्यति सक्रिय हुनुहुन्न । तर, उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको नाता लगाएर न्यायपालिकाको भागबण्डामा मन्त्री बनाइएको प्रष्ट छ ।
हमाल नाताले प्रधानन्यायाधीश जबराका साखै जेठान पर्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिलो बिबाह हमालकी आफ्नै बहिनी बिबाह गर्नुभएको हो ।
हमालले सर्वोच्चका विचाराधीन मुद्दाहरूमा न्यायपालिका कम्फरटेबल बनाउन मन्त्री उपाहार पाउनुभएको देखियो अदालतकै एक अधिकारीले बताउनुभयो । हमाल सांसद नभएकाले उहाँ बढीमा ६ महिना मन्त्री बन्न पाउनुहुनेछ ।
उहाँले मन्त्रीमा निरन्तरता पाउनका लागि यसबीचमा सांसद हुनुपर्नेछ । माघमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा हमाललाई सांसद बनाउने सम्मको रणनीतिमा यो भागबण्डा लागेको श्रोतले खुलायो ।
असार २८ को फैसलामा संलग्न अन्य न्यायाधीशको कोटाबाट पनि राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग दिने समझदारी सत्तारुढ गठबन्धनमा बनेको छ । उहाँहरुलेपनि एक एक गरेर भाग खोज्नुभएको छ त्यो पूरा गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ।
माधव नेपाल विहीन एमालेमापनि तमासा, एउटै कमिटीको दुईतिर अधिवेशन, कुर्सी तोडफोड
एमालेको महाधिवेशनमा कांग्रेसले जुधायो, यस्तो छ आजको निर्णय
प्रधानन्यायाधीश विवाद र महाअभियोग बारे प्रचण्डले मुख खोले, आगामी चुनाव आजैबाट आत्तिए
“जनताको बजेट खोसेर, नागरिकता विधेयक रोकेर” सभामुखले संसद मृत बनाए : ओली
पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाद्धारा सबै न्यायाधीशको राजीनामा माग
प्रचण्ड अस्थिरताको खेलाडी हुन् : प्रदीप ज्ञवाली
राजीनामा त प्रधानन्यायाधीशले हैन प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ
प्रधानन्यायाधीशको स्पष्टोक्ती राजीनामा दिन्नँ : दलले लिएका यी लाभका कारण संसदमा सुरक्षित
प्रधानन्यायाधीश विवादबारे अध्यक्ष ओलीको स्पष्ट लाईन : एमालेलाई गुटबन्दीमा पस्नु छैन
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए आन्दोलनमा उत्रिने डा. गोविन्द केसीको चेतवानी
आज देशभर यसरी हुँदैछ एमालेको पालिका अधिवेशन
कांग्रेस, माओवादी र एस सुप्रिमो पछार्न एमालेले तयार गर्यो आगामी चुनावको खतरनाक हतियार
सरकारले तोक्यो अर्थ मापदण्ड : सरकारले कुनैपनि भत्ता नदिने, विदेश भ्रमण र भोज भतेरमा रोक
आर्थिक राशिफल : चन्द्रमाको खेलले यी राशिले उठाउँदैछन् ठूलो लाभ / २०७८ कार्तिक ५ गते
‘दुई पटकसम्म शारीरिक सम्पर्क भएको हो, बाँकी के–के भयो थाहा भएन’
चन्द्रमाको शुभ स्थितिले यी राशिहरुका लागि अति शुभ दिन, केहीलाई संकट : राशिफल २०७८ कार्तिक ५ गते
पूर्व राजपरिवारका सबै पुस्ता पहिलोपटक एउटै मञ्चमा, चर्चितहरुको लर्कोले नेताहरुलाई झस्कायो